Ny Realme 3 dia havoaka amin'ny fomba ofisialy amin'ny 4 martsa | Androidsis
Ny Realme 3 dia tao anatin'ny tsaho efa ela. Ny telefaona dia nandrasana ofisialy amin'ny telovolana voalohany amin'ny taona miaraka amina sensor 48 MP, ary dia ho toy izany. Androany, nanamafy ilay orinasa, tamin'ny alàlan'ny sioka iray, fa hanomboka ny smartphone Realme 3 amin'ny 4 martsa ho avy izao.
Ny afisy fandefasana aseho etsy ambany, navoakan'i Realme, dia misy modely feno kintana. Ny sary tafaporitsaka an'ny smartphone Realme 3 niseho vao tsy ela akory izay dia nanamafy izany Izy io dia manana modely feno kintana amin'ny fonony aoriana. Mampitolagaga ny fifanandrifanan'ireo endrika roa ireo.
Manamafy izany ny afisy Ny Realme 3 dia havoaka amin'ny 12:30 PM any India amin'ny 4 martsa. Ny ankamaroan'ny famaritana ny Realme 3 dia eo am-pamonosana azy ireo ankehitriny. Na izany aza, nanamafy ny talen'ny CEO Realme Madhav Sheth fa ho entin'i ny Helio P70 avy amin'i Mediatek.
Sary tena navoakan'ny Realme 3 tafaporitsaka
Ny tsiliantsofina dia milaza fa ny fitaovana an-telefaona dia mety misy a Efijery 6,3-inch notch izay hanolotra vahaolana FullHD +. Ny SoC an'ny telefaona dia afaka tohanan'ny RAM 4GB. Ny ao aoriany dia miaraka amina fananganana fakan-tsary roa. Voalaza fa mety ahitana sensor 48 na 16 MP megapixel voalohany ary sensor 5ème megapixel faharoa. Ny tontonana aoriana amin'ny telefaona dia misy scanner an'ny tanan-tànana. Afaka mandeha amin'ny bateria 4,000mAh izy io. (Jereo: Hanokatra magazay ara-batana voalohany ny Realme amin'ity taona ity)
Ny ampitson'ny nanambarana ny Realme 3, Hanokatra ny F11 Pro any India. Sombiny vitsivitsy monja amin'ny andinindininy amin'ny F11 Pro nipoitra hatreto. Betsaka ny tsaho milaza fa azo alefa amin'ny chipset MediaTek vaovao izy io, izay mety ho Helio P70 ihany koa. Ny SoC dia azo nampitaina RAM 6 GB ary fitehirizana anatiny 128 GB.
Nanamafy izany ny Oppo ny F11 Pro dia mampiseho fampisehoana tsy mitongilana 6.5-inch miaraka amin'ny fakantsary selfie pop-up 32 megapixel. Ny ao ambadiky ny telefaona dia misy fananganana fakan-tsary miorina miaraka amina sensor 48-megapixel voalohany. Ny finday dia antenaina hanohana ny famandrihana VOOC haingana amin'ny alàlan'ny USB-C. Hita amin'ny loko roa izy io: Thunder Black sy Aurora Green.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Realme 3 dia havoaka amin'ny fomba ofisialy amin'ny 4 martsa
Huawei hanokatra fivarotana ara-batana voalohany ivelan'i Shina any Vienna, Austria